Talooyinka Times Spotify
Waxaa jira dhowr ah baakadaha Times in la soo bandhigay by shirkadda ee la xiriirta ee adeegyada Spotify laakiin inta badan isticmaala waxaa ka warqabin xaqiiqda iyo erey-ka la xiriira in la shaqeeyaa sidii ciidan wadista. Tutorial waxaa loo qoray si ay u hubiyaan in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah aqoon tahay in arrintan la xiriira oo uu helo wax lagu sameeyey hab sax ah iyo jihada. Tutorial Tani waa dhan oo ku saabsan farqiga u dhexeeya mobilada in la bilaabay shirkadda in ay xoojiyaan saldhig user habka ugu fiican.
Qaybta 1. noocyada Times Spotify iyo khilaafaadka
Qaybta 2. Sida loo cusboonaysiiyo Times Spotify?
Qaybta 3. Sidee to cancel Times Spotify?
Sida lagu Xusi, ka hor iyo weliba in ay jiraan tiro ka mid ah mobilada ee la bixiyo shirkadda si loo hubiyo in user la wada cafiyo oo uu helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijada tahay in arrintan la xiriira. Qaybtan tutorial inay hubiyaan in user helo heshiis ugu fiican ee la xiriirta mobilada in loo soo bandhigay iyo kala duwanaanta la xiriira ayaa sidoo kale iftiimiyay in sifooyinka wanaagsan ka dhigi doonaa.
Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in khilaafaadka ka ayaa la tixgeliyaa sameeyo halka lambarka ugu cusboonaato iyo sidoo kale kor u qaaday maadaama ay tani hubiyo in user helo heshiis ugu fiican dhigi lahaa iyo sidoo kale helo gobolka adeegyada farshaxanka arrintan la xiriira. Farqiga ayaa lagu sharaxay hoos ku faahfaahsan buuxa si loo xaqiijiyo in sida ugu fiican oo gobolka ka mid ah adeegyada farshaxanka waxaa lagu riyaaqay ee ku dhawaad ​​lacag la'aan ah oo dhan iyo miisaaniyadda oo la xiriirta adeegyada ay tani sidoo kale weli waafaqsan shuruudaha isticmaala.
Marka aad aragtid calaamadaha user a kor u xisaabta Spotify markaas xorta ah Spotify waa qorshe ah in la siiyo by default sida ay tahay mid ka mid ah taas oo ka dhigaysa hubiyo in user helo xubinnimada lacag la'aan ah 7 maalmood ee ugu horeeyay oo uu helo adeegga baaro si fiican ka hor finalka Go'aanka iibsatay ayaa laga sameeyey. Waxaa ugu fiican oo gobolka ka mid ah istiraatiijiyadda tahay in la fuliyo shirkadda si loo hubiyo in wax iibsiga user la wasaqaysanna leh si weyn u kordhin. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa inay hubiyaan in sicir-dhimista waxaa tarin buuxa iyo adeegga waxaa kaliya oo aan loo isticmaalo, laakiin go'aanka kama dambaysta ah waxaa sidoo kale loo sameeyey.
Sidoo kale waa mid ka mid ah adeegyada ay u hubiso in uu Times bixisay waa riyaaqay sameeyo. Farqiga u dhexeeya waa in dadka isticmaala inay hubiyaan in ugu fiican oo gobolka ka mid ah muuqaalada tahay in ay gundhig Times gudihiisa waxaa ku riyaaqay si weyn kordhiyo si loo hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan sameeyaan. Waxaa sidoo kale in la xuso in dadka isticmaala ay tahay in ay hubiso in Times waxa kor loogu qaaday oo kaliya haddii user si buuxda u qanacsan sameeyo. Kharashka hagaajinta waa $ 0.99 iyo lambarka buuxa waxaa lagu dalacayaa heerka $ 10 bil kasta.
Sidoo kale waa rukun ah oo lacag la'aan ah in la bilaabay shirkad si uu u hubiyo in user helo adeegga lacag la'aan ah muddo waqti 60 maalmood ah. Faraqa kaliya ee u dhexeeya oo lacag la'aan ah iyo xidhid tijaabadani waa in user si ay u taraynin version raad baahan yahay si loo hubiyo in credit card ka diiwaangashan yahay iyo faahfaahinta waxa lagu siiyey in shirkadda si Times ee ugu cusboonaato aan arin kasta ka dib waqti tijaabo dhamaado. Waxaa sidoo kale in la xuso in user wuxuu hubinayaa in in ugu fiican iyo kan gobolka ee adeega farshaxanka loo bixiyey shirkadda waxaa ku riyaaqay ee user kaliya waa ogyahay functionalities iyo doonayo inuu ku bixiyo isku day ah in ay Times ee muddo dheer.
Spotify aan xad lahayn
Waa mid ka mid ah baakadaha ugu fiican in la soo bandhigay ee la soo dhaafay oo dhan isticmaala kuwaas oo u harraadsan dhab ah music qori laga yaabaa in la hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah adeegyada tahay waxaa ku riyaaqay habka ugu fiican. Times waxaa loo meesha ka saaray iyo xubnaha aan xad lahayn oo aan loo ogolaan doonin in ay sii cusboonaysiin. The baakadaha jira lagu diinta premium Spotify iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in dhammaan baakadaha aan xad lahayn ayaa loo diinta premium si degdeg ah.
Si aad u qabsadaan suuqa aad u weyn arday qorshahan la soo bandhigay iyo ardayda ka heli dhimis ah 50% ee qiimaha la socota premium guud ahaan haddii ay la xaqiijiyo si guul leh. Waa sabab la mid ah in xirmo ugu fiican iyo ardayda waxaa la hubiyo in aan la sii oo keliya, laakiin dadka isticmaala ay sidoo kale ka heli natiijada ugu fiican iyo dakhliga shirkada waxaa sidoo kale kor u kacay. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in aad isaga xaqiijin sida arday by socda URL https://spotify.sheerid.com/ si aad u hesho natiijooyinka ugu fiican.
Waa tallaabooyin dhabta sahlan tahay in la raaco iyo user waa in ay hubiyaan in habka hoos ku xusan waxaa la hirgeliyey si loo hubiyo in natiijada ugu wanaagsan waxaa lagu helaa arrintan la xiriira sameeyo:
User waa inay hubiyaan in website-ka rasmiga ah ee adeegyada waxaa lagu soo booqatay oo Times joogtada ah ee caymiska la doorto:
Qaabka mushaar-bixinta waxaa markaas oo laga soo xulay hooseysa:
User ayaa markaas ka heli doontaa rasiid:
Tab Times waxaa markaas in la riixi:
Waa in la ogaadaa in Times la cusboonaysiiyo, laakiin haddii user doonayo in la hubiyo in ay amarka u dagdag ah la fuliyo si ay u credit card markaas bareeg isbedel bixinta waa in loo soo xulay in ay dhamayso:
Ka dib waa habka ay tahay in la codsatay in arrintan la xiriira si aad u hesho natiijooyinka ugu fiican:
Marka aad gasho akoonka user u baahan yahay in riix magaca isticmaalaha ah:
Tab Times waxaa markaas in la riixi in la sii wado,
Aragtiyaha fursadaha ii tahay in la soo xulay hoos madax ah burin Times dadkayguna waa sida hoos ku qoran:
Fursada "Riix halkan si aad sii wado in bogga la joojiyo" waa ka dibna in la riixi:
Sabab la joojiyo waxaa markaas in la soo xulay in ay ku talaabsato:
User ayaa markaas u baahan yahay inuu qortaa erayga sirta ah si ay u hubiyaa in uu bogga soo socda u muuqataa meesha tab ee "Jooji Times Spotify Premium" waa in la soo xulay:
Geedi socodka la dhamaystiro in ay ka buuxaan oo Times ayaa la baajiyay,
Spotify u iPhone online ama Spotify offline u iPhone
> Resource > Spotify > Talooyin Spotify Times